10 Dugsiyada Ganacsi ee ugu Fiican Kanada oo leh Deeqo waxbarasho
Akhriso 10ka iskuulada ganacsiga ee ugufiican Kanada oo leh deeqo waxbarasho iyo faahfaahintooda lagu bixiyay qodobkaan, waxay kaa caawin doontaa inaad ogaato oo aad doorato iskuulka ganacsiga kugu habboon adiga iyo sidoo kale aad dugsiga ganacsiga aad doorbideyso ee barnaamijka deeqda waxbarasho .
Ma waxaad tahay arday dhigta dugsiga sare, qalinjabiye oo doonaya inuu wax ka barto dugsiga ganacsiga ugu fiican Kanada? Ama shaqsi raba inuu kasbado aqoon dheeri ah oo ku saabsan ganacsiga iyo adduunka ganacsiga, oo ay u badan tahay inuu u dhaqaaqo waddo cusub oo shaqo, inuu helo shaqo cusub ama u baahan yahay aqoonta ganacsiga si uu ugu dabaqo goob hore u jirtay oo aad horay uga shaqeynaysay? Ama sababo kale awgood, waa hagaag, waxaad qaadatay tillaabadii ugu horreysay si aad ugu guuleysato guushaada adoo ku soo dhacaya maqaalkan.
1 Ku saabsan Iskuulada Ganacsiga ee Kanada
1.1 Waa maxay iskuulka ganacsiga?
1.2 Koorsooyinka / Barnaamijyada Dugsiga Ganacsiga
1.3 Darajooyinka Dugsiga Ganacsiga
2 10 Dugsiyada Ganacsiga Ugu Fiican Kanada
2.1 Schulich Iskuulka Ganacsiga
2.2 Desautels Kuliyada Maareynta
2.3 Dugsiga Ganacsiga Smith
2.5 John Molson Iskuulka Ganacsiga
2.6 Dugsiga Maareynta Telfer
2.7 Sobey School of Business
2.8 Iskuulka Ganacsiga ee Alberta
2.9 Iskuulka Ganacsiga ee Goodman
2.10 UBC Sauder Iskuulka Ganacsiga
3 Jaamacadaha ugu Fiican Kanada ee Ganacsiga
Ku saabsan Iskuulada Ganacsiga ee Kanada
Waxaan ururiyey faahfaahinta 10-ka dugsi ganacsi ee ugu wanaagsan Kanada inaad adigu ka xulato maadaama ay hubaal ku siin doonaan waxaad raadinayso kadib markii dhammaan dugsiyadu ay bixinayeen waxbarasho aad u wanaagsan tobanaan sano iyo waxa intaa ka badan, 10 ganacsiga ugu fiican iskuulka aan ku qori doono qodobkaan ayaa sidoo kale bixinaya deeqo waxbarasho.
Iyagu waa iskuulada ganacsiga ee ugu wanaagsan Kanada oo bixiya deeqo waxbarasho ardayda danaynaysa kuwa gudaha iyo kuwa caalamiga ahba. Maqaalkan waxaad ku daba-gali kartaa barnaamijka shahaadada ganacsiga ee dugsiga ganacsiga ugu fiican Kanada oo aadan wali bixin dime, laga yaabee inaad bixiso kalabar ama lagaa caawiyo xagga dhaqaalaha qaab ama qaab kale.
Kobcinta kartidaada marka hore waxay ka bilaabantaa inaad wax u barato meesha saxda ah oo kiiskan, dugsiga ugu fiican maxaa yeelay dugsiga ugu fiican ayaa ah meesha aad kula kulanto, ku aragto kuna la kulanto waxyaabaha ugu fiican. Macallimiinta ugu fiican ayaa u jooga inay ku siiyaan waxbarasho tayo leh, tas-hiilaadka ugu wanaagsan ayaa jira si ay kuu siiyaan tababar iyo khibrad gacmeed iyo sababta oo ah dugsiga ayaa lagu qiimeeyay inuu yahay "kan ugu fiican" waxaad si isku mid ah uga faa'iideysan kartaa aqoonsiga kaas oo si weyn kuu caawin doona ee shaqaalaha.
Hadda, waa dugsiga ugu fiican ganacsiga mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee adduunka lagu aado - Kanada. Way cadahay in jawigu si weyn u saameynayo horumarka shaqsiyeed sidaas darteed Kanada si ballaaran ayaa loo aqoonsaday, heer caalami ah, oo ah meel u gaar ah daraasadda oo si wanaagsan u saameysa horumarka daraasadda ee shakhsiyaadka halkaas wax ku barta.
Kanada waxay aqbashaa ardayda adduunka oo idil inay wax ka bartaan koorso kasta oo ay doortaan jaamacadooda, laakiin haddii aad ka timid meel ka baxsan Kanada markaa waxaad u baahan tahay inaad wax ka ogaato Xeerarka fiisaha ardayda Kanada iyo shuruudaha kaas oo bilaabi doona safarkaaga arday Canadian ah.
Waa maxay iskuulka ganacsiga?
Dugsiga ganacsiga waa hay'ad heer jaamacadeed ah oo ku takhasustay koorsooyinka iyo barnaamijyada la xiriira maamulka ganacsiga ama maareynta iyo bixinta shahaadooyinka la xiriira goobta.
Koorsooyinka / Barnaamijyada Dugsiga Ganacsiga
Xisaabinta, Hababka cilmi baarista, sayniska Maareynta, Maareynta Kheyraadka Aadanaha, Dhaqaalaha, Maamulka, Hal-abuurka, Nidaamyada macluumaadka Maareynta, Xiriirka Dadweynaha, Cilmu-nafsiga abaabulan, Ganacsiga Caalamiga ah, Saadka, Real Estate, Suuq-geynta, Istaraatiijiyadda, Habdhaqanka Urur, iwm.
Darajooyinka Dugsiga Ganacsiga
Kuwani waa shahaadooyin aad ka heli karto ka dib raadinta barnaamijka ganacsiga waana;
Miyaad heshay labadii darajo ee ugu horreeyay oo aad dooneysaa inaad si siman u raacdo shahaadada mastarka sida MBA waddan kale sida Mareykanka? Helitaanka MBA ee Oxford waa inuu noqdaa mid lagu qanco ama la arko liiska iskuulada MBA ee USA oo xulashadaada samee.
10-ka dugsi ee ugu fiican ganacsiga ee aan soo qori doono ayaa laga yaabaa inay ku bixiyaan deeqo waxbarasho dhamaan ama in yar oo ka mid ah barnaamijyada shahaadada ee kor ku xusan runtii way ku kala duwan yihiin iskuulada si kastaba ha noqotee kiisku malaha waxaan ku tilmaami doonaa faahfaahinta aan ka bixin doono ee ku saabsan dugsi kasta.
10 Dugsiyada Ganacsiga Ugu Fiican Kanada
Schulich Iskuulka Ganacsiga
Desautels Kuliyada Maareynta
Dugsiga Ganacsiga Smith
John Molson Iskuulka Ganacsiga
Dugsiga Maareynta Telfer
Iskuulka Ganacsiga ee Alberta
Iskuulka Ganacsiga ee Goodman
UBC Sauder Iskuulka Ganacsiga
Waxaa la aasaasay 1966 iyo mid ka mid ah iskuulada ganacsiga ee ugu sareeya Kanada, Iskuulka Schulich ee ganacsiga wuxuu ku yaal Toronto, Ontario, Canada wuxuuna ku xiran yahay Jaamacadda York. Schulich wuxuu bixiyaa shahaadada koowaad, shahaadada qalin-jabinta, shahaadada diblooma, PhD iyo barnaamijyada fulinta ee koorsooyin iyo barnaamijyo badan oo ganacsi oo rogrogmi kara.
Deeqsinimada asxaabta iyo ardayda qalin jabisay, ardayda Schulich waxay marin u helaan kaalmo dhaqaale oo ballaaran iyada oo loo marayo deeqo waxbarasho, abaalmarinno iyo buundooyin. Deeqaha waxbarasho ayaa loo heli karaa ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ah heer kasta oo daraasad ah illaa iyo inta aad tahay arday, mid soo galaya ama duq ah, oo aad leedahay waxqabad tacliimeed oo heer sare ah.
Desautels Kuliyada Maareynta waa macallin ka tirsan Jaamacadda McGill ee loogu talagalay shahaadooyinka MBA, oo la aasaasay 1906 oo loo qoondeeyay mid ka mid ah iskuulada ganacsiga ugu wanaagsan Kanada. Kulliyaddu waxay bixisaa barnaamijyo ganacsi oo heer-sare ah iyo kuwo qalin-jabis ah iyo sidoo kale bachelor, masters iyo PhD.
Desautels Kulliyadda maaraynta ayaa sii waday inay soo jiidato ardayda mustaqbalka ee adduunka oo dhan inay kaqeyb qaataan waxbarashadeeda heer sare waxayna sidoo kale ka caawisay qaar ka mid ah ardaydaas dhaqaale ahaan.
Kulliyaddu waxay bixisaa xulasho ballaaran oo deeqo waxbarasho ah oo dhammaan ardayda ay marin u heli karaan oo ay ku jiraan deeq waxbarasho oo ku saleysan aqoon taas oo ardaydu aysan u baahnayn inay dalbadaan laakiin lagu xusho waxqabadkooda muuqda ee tacliinta, hoggaaminta iyo waxqabadyada manhajka dheeriga ah. Waxaa sidoo kale jira deeqaha waxbarasho ee koorsada ah in ardayda danaynaysa ay u baahan yihiin inay codsadaan si loo xusho.
Dhammaan deeqaha waxbarasho ayaa loo heli karaa ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ahba ee shahaadada koowaad iyo heerka qalin-jabinta ee daraasadda.
The Dugsiga ganacsiga Smith waa iskuulka ganacsiga ee Jaamacadda Queen oo ku yaal Kingston, Ontario, Canada oo la aasaasay 1963. Dugsiga ganacsiga ee Smith wuxuu ardayda ku qalabeeyaa xirfadaha lagama maarmaanka ah, aqoonta iyo kartida shaqsiyadeed ee ay u baahan yihiin si ay ugu baraaraan adduunyada ganacsiga ee sida joogtada ah u beddeleysa tanna waxaa lagu sameeyaa iyada oo loo marayo barnaamijkeeda shahaadada koowaad ee ganacsiga. barnaamijyada MBA ee aadka loo amaanay iyo barnaamijyada kale ee qalin jabinta ah.
Ardayda caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahba ee dugsiga ganacsiga Smith waxay leeyihiin fursad ay ku helaan deeqo waxbarasho oo badan. Deeqaha gelitaanka waxaa la siiyaa musharixiinta iyada oo lagu saleynayo waxqabadka akadeemiyadeed ee wanaagsan sidaa darteed uma baahna inay dalbadaan waxaana sidoo kale jira deeqo waxbarasho oo ay maalgeliso dowladdu oo ay ardaydu u baahan doonaan inay codsadaan si loo xusho.
Waxaa la aasaasay 1907 waxayna ku taalaa Montreal, Canada, HEC Montreal waa dugsiga ganacsiga qalin-jabinta ee Jaamacadda Montreal oo loo aqoonsaday inay tahay mid ka mid ah iskuulada ganacsiga ugu fiican Kanada oo bixiya barnaamijyo MBA oo buuxa, masters, PhD iyo barnaamijyo qalin-jabin gaaban ah.
HEC Montreal waa jaamacad ku baxda luuqada faransiiska oo bixisa waxbarasho maareyn caalami ah oo caan ah iyo cilmi baaris waxaana tan iyo markii la tababarayay soona saaraysa maareeyayaal ka qayb qaata koritaanka iyo barwaaqada bulshada
Iyada oo macnaheedu yahay ka qayb qaadashada bulshada iyo adduunka guud ahaan, HEC Montreal waxay siisaa deeq waxbarasho iyo noocyo kale oo gargaar lacageed ardaydeeda labadaba kuwa caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee heerarka kala duwan ee daraasadda.
Kani waa iskuulka ganacsiga ee Jaamacadda Concordia, oo ku yaal Montreal, Quebec, Kanada oo la aasaasay 1974. John Molson iskuulka ganacsiga Waxay bixisaa jawi barasho iyo jawi cilmi baaris oo awood u siiya ardaydeeda inay gaaraan awoodooda ugu weyn ee ugu wanaagsan ganacsiga iyo bulshada.
Machadku wuxuu bixiyaa shahaadada koowaad, qalin-jabinta, shahaadada koowaad iyo barnaamijyada shahaadada PhD oo ay ku jiraan barnaamijyada MBA ee fulinta.
Ardayda John Molson waxay heli karaan deeqaha waxbarasho ee sanadlaha ah ee ay heli karaan labadaba shahaadada koowaad iyo sayniska ardayda sayniska oo muujiyey waxqabad tacliimeed oo heer sare ah.
Loogu magac daray sharafta mid ka mid ah ardaydeeda qalinjabisay, Ian Telfer, the Iskuulka maamulka ee Telfer waa iskuul ganacsi oo ku yaal Jaamacadda Ottawa waxaana la aasaasay 1969 iyadoo bixisa dhowr barnaamijyo shahaadada koowaad iyo koowaad ah oo ay ka mid yihiin fulinta MBA.
Dugsiga Telfer ee maamulka ayaa kaa caawin doona inuu kugula xiriiro wax kasta oo dadka, ilaha iyo fursadaha aad u baahan tahay si aad u xaqiijiso hamigaaga iyo ka hadalka fursadaha, iskuulku wuxuu siiyaa tiro deeqsinimo ah, abaalmarinno iyo kaalmooyin kale oo maaliyadeed ardayda.
Deeqaha waxbarasho ayaa loo heli karaa ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee heerarka kala duwan ee daraasadda.
Waxay ku taal Nova Scotia, Canada oo la aasaasay 1934, the Sobey iskuulka ganacsiga waa iskuulka ganacsiga ee Jaamacadda Saint Mary waxayna kujirtaa mid kamid ah iskuulada ganacsiga ugufiican Kanada. Sobey waxay bixisaa barnaamijyo shahaadada koowaad ah, barnaamijyada shahaadada qalin-jabinta, barnaamijyada PhD iyo dhowr barnaamijyo MBA ah.
Dugsiga Ganacsiga ee 'Sobey Business School' wuxuu daneeyaa wax badan oo ku saabsan ardaydiisa wuxuuna ku taageeraa iyaga oo aan libiqsanayn sidaas awgeed bixinta sanadlaha ah ee barnaamijyo badan oo deeqo waxbarasho ah oo ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ah ay dalban karaan haddii ay yihiin barnaamijyo shahaadada koowaad ama qalin-jabinta ah.
Tani waa iskuulka ganacsiga ee Jaamacadda Alberta, oo la aasaasay 1916 loona aqoonsaday mid ka mid ah iskuulada ganacsiga ugu fiican Kanada. Dugsiga ganacsiga Alberta wuxuu bixiyaa shahaadada koowaad, masters-ka iyo barnaamijyada shahaadada PhD iyo barnaamijyo waqti-buuxa iyo waqti-dhiman ah oo ay ku jiraan barnaamijyada fulinta.
Dugsiga ganacsiga ee Alberta wuxuu siiyaa fursado qaab deeq waxbarasho iyo noocyo kale oo kaalmo maaliyadeed ah oo loogu talagalay ardaydeeda ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudahaba waxay dalban karaan abaalmarintan deeqaha waxbarasho. Waxaa jira deeqo waxbarasho iyo abaalmarino jaamacadaha iyo MBA iyo barnaamijyada sayniska.
Goodman, sida badanaa loo yaqaan, waa iskuulka ganacsiga ee Jaamacadda Brock, oo la aasaasay 1964 waxaana laga aqoonsan yahay iskuulada ganacsiga ugu fiican Kanada oo bixiya barnaamijyo ganacsi heerarka tacliinta sare iyo qalin-jabinta.
The Iskuulka Ganacsiga ee Goodman waxay u heellan tahay inay siiso ardaydeeda waxa ay u baahan yihiin si ay u horumariyaan oo u guuleystaan, siinta fursado deeqo kala duwan ayaa ah mid ka mid ah tallaabooyinka badan ee dugsigu qaado si uu uga caawiyo ardayda inay ku fiicnaadaan.
Deeqaha waxbarasho ayaa loo bixiyaa si loo aqoonsado guulahaaga waxbarasho iyo inay kaa caawiso inaad la kulanto baahiyahaaga dhaqaale iyo deeqaha waxbarasho waxaa heli kara ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ah ee heerarka kala duwan ee waxbarashada.
Waxaa la aasaasay 1956 waxayna ku taal Vancouver, UBC Sauder Iskuulka Ganacsiga waa kuliyad ee Jaamacadda British Columbia u heellan baritaan adag iyo mid ku habboon, oo bixiya barnaamijyo jaamacadeed, barnaamijyo qalin-jabiya, barnaamijyo PhD ah iyo barnaamijyo ganacsi oo fulineed oo dhaliya hoggaamiyeyaal ganacsi oo dhaqaajiya isbeddel iyo qaabeynta warshadaha iyo ururada adduunka oo dhan.
Waxaa jira dhowr deeqo waxbarasho oo loo heli karo ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee UBC Sauder taas oo kaa caawin doonta maalgelinta waxbarashadaada. Maalgelinta deeqdani waxay ku habboon tahay ardayda qalin jabisa iyo kuwa shahaadada koowaadba ka qaata koorso kasta oo ganacsi oo ka socota machadka.
Jaamacadaha ugu Fiican Kanada ee Ganacsiga
Jaamacadda British Columbia
Jaamacadda Saint Mary
Tani waxay soo afjartay 10-kii iskuul ee ganacsiga ugu fiicnaa Kanada oo ay la socdaan faahfaahintooda deeqaha waxbarasho hadda waxaa lagaa tagay adiga inaad doorato hay'ad ku habboon danahaaga, aad ugu dadaal sidii aad ku heli lahayd gelitaanka oo aad u dalban lahayd barnaamijyada deeqaha waxbarasho ee khuseeya.
Inta badan guushaada nolosha waxay inta badan ku saleysan tahay meeshii aad wax ku baratay, waxaa laga yaabaa inaad leedahay karti tayo leh laakiin inaad hibadaas ugu horumariso sida saxda ah, qofka saxda ah iyo meesha saxda ah ayaa wax badan ka qabta. Iskuulada qaarkood waxay kujiraan kuwa ugufiican maxaa yeelay waxay haystaan ​​ilo dhaqaale oo sax ah si ay uga caawiyaan horumarinta iyo qaabeynta hibooyinka si guulaha waaweyn
Shahaadada Ganacsi ee Ugu Haboon ee La Helo
Sida Loo Helo Ogolaanshaha Dugsiga Ganacsiga Harvard
Jaamacadaha ugu Fiican injineernimada qaab dhismeedka Kanada
Barnaamijyada Shahaadada Masters-ka ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah
Deeqaha Canadianka Barashada Hagaha Dibadda Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo
iskuulada ganacsiga ee ugufiican Kanada
Previous Post:4 -ta ugu sarreeya deeqaha waxbarasho ee kubbadda cagta ee Mareykanka
Post Next:Shuruudaha Jaamacadda Carleton | Khidmadaha, Deeqaha waxbarasho, Barnaamijyada, Qiimeynta
Pingback: 9 Shahaadooyin Ganacsi oo mudan in la helo iyo sababta - Adeegyada Waxbarista onlaynka ah